China HY289 Bundle Of Grass Machine Manufacturer and Supplier |Aoyuan
Mepee draịva CAM dị mfe na nhazi, ọ dabara nke ọma na nkwụsi ike na-arụ ọrụ, megide olu, ịkpụzi, njikwa kọmputa.
The baler nakweere knotter ebubata na isi mgbasa ozi, na-arụ ọrụ kwụsiri ike na ọnụ ọgụgụ dị elu.
Igwe ahụ dum nwere axis longitudinal symmetrical, ezigbo ịnya ụgbọ ala kwụsie ike, traction dị mfe, ma nwee ike imeghari ka ọ rụọ ọrụ na atụmatụ obere na oge niile.
The baler adopts a obosara ala ewepụghị ewepụghị nha nha nha Roller ụdị pickup, na profiling wiil na abụọ n'akụkụ, nke ọ bụghị nanị na-ebelata ọnwụ nke ahịhịa na-efu atụtụ, ma na-ebelata ibuli elu nke hay iburu, nke mere na ahịhịa na-adịkarịghị disordered na A na-ebelata ịhịa aka n'etiti okooko osisi na akwụkwọ, nke dị mkpa karịsịa maka Alfalfa na ahịhịa ahịhịa ndị ọzọ na-adị mfe ịhapụ okooko osisi.
Enwere nkwụsị ala zuru oke n'etiti ọnụ ụlọ bale na agịga nke baler, ya mere agịga ahụ agaghị emetụ ala mgbe ọ na-arụ ọrụ na mpaghara ala dị ala, ya mere a na-akagbu usoro nchebe agịga omenala.A na-eji wiil ndị na-emepụta ihe, nke nwere ike ịrụ ọrụ na ebe dị ala na nke na-adịghị mma.
Site na iburu ruo n'ichebe bales, ahịhịa na-agagharị mgbe niile n'ahịrị kwụ ọtọ na igwe.Usoro mbufe ahịhịa na baling nke ezi uche dị na ya na-enyere aka melite ugboro ole piston na-emeziwanye ike mmepụta ya.
A na-eji ya eme ihe maka nkwakọ ngwaahịa ahịhịa na njem, ngwugwu ahịhịa
igwe nlereanya Akụkụ (ogologo * obosara * ịdị elu) Ibu (t) Mpaghara ala (m2) Isi ike (kw) ọsọ (r/m)
Nke gara aga: Igwe eletrọnịkị HY280 na-ebugharị igwe na-akpa akwa otu akwa na-agba ọsọ
Osote: Hy298 mmanụ mikpuru latch agịga warp igwe eji akpa akwa